कर नबुझाउने करदाताको सूची तयार
२४ चैत्र २०७६, सोमबार
रासस , २४ बैशाख २०७६, मंगलवार, १२:३४ pm
लहान। आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान सिरहाले लामो समयदेखि कर नबुझाउने करदातामाथि कानूनी कारवाही अघि बढाएको छ। दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाएका करदाताको सूची तयार गरी कानूनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानका निमित्त प्रमुख कर अधिकृत ललितनारायण यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका दुई हजार तिन सय २६ करदाताले लामो समयदेखि कर नबुझाउँदा रु १४ करोड ११ लाख नौ हजार चार सय २७ राजश्व उठाउन बाँकी छ । यस्तै आयकरमा दर्ता भएका करदाताबाट रु दुई करोड ६७ लाख राजश्व उठन नसकेपछि कानूनी कारवाही अघि बढाइएको यादवले बताए।
यसैगरी आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहानले चालू आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नौ महीनाको अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ। चालू आव २०७५र७६ को चैत मसान्तसम्ममा एक अर्ब ५४ करोड १७ लाख ४० हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा कार्यालयले सो अवधिमा रु एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख छ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ।
चौधरी ग्रुपको नयाँ उत्पादन ‘माल्टोजीङ्ग’ सार्वजनिक
भारतमा गुणस्तर फेल भएका औषधिहरु नेपालमा खुलेआम बिक्री, गम्भीर ‘साइड…
राजश्वमा १.६४ प्रतिशतको योगदानसहित हामी अग्रणी करदाता: चौधरी ग्रुप, सिजी टेलिकमलाई…
हर्लिक्स, भिभा, बुष्टलाई चुनौति दिने योजनासहित चौधरी ग्रुपले ल्यायो ‘माल्टोजिङ’
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाले चीनमा कारखाना निर्माण गर्ने
टिसिएलको ‘८के टिभी’लाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरु
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीले चासो राख्दा स्वास्थ्यमन्त्री मौन
‘लकडाउन’को अवधि फेरि थप्ने तयारीमा सरकार, आज मन्त्रिपरिषद बैठक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ३१ अर्ब २३ करोड रुपियाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा उपचार कोषमा रु. एक अर्ब ३२ करोड जम्मा
विदेशमा रहेका नेपालीको समस्या गैरआवासीय नेपाली संघले समाधान गर्ने
गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस, शिवाकोटी, खनाल र अधिकारीमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
मेगा बैंकका यी ५५ शाखा आज खुल्नेछन् (सूचीसहित)